Trump oo ‘qiimaynaya Flynn oo kaaliyihiisa ah’ | Baydhabo Online
Trump oo ‘qiimaynaya Flynn oo kaaliyihiisa ah’
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay “in uu qiimaynayo” xiriirkii uu kaaliyihiisa dhanka ammaanku la yeeshay danjiraha Ruushka, sida uu sheegay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka.
Flynn ayaase Aqalka Cad u sheegay in laga yaabo in laga wadahadlay xayiraadaha Ruushka saraan. Waa sharcidarro in shaqsiyaaad muwaadiniin ah ay si iskood ah faraha ula galaan dublamaaasiyadda Maraykanka, taleefanadaasna waxay ku aadanaayeen dhamaadkii sanadkii hore ka hor inta aan Flynn loo magacaabin in uu maamulka ka mid noqdo.
Afhayeenka Aqalka Cad Sean Spicer ayaa galinkii dambe ee Isniintii sheegay “In madaxweynuhu qiimaynayo xaaladda”.
Hadalka afhayeen Spicer ayaase imanaya waxyar uun ka dib markii Kellyanne Conway oo ka mid ah afhayeennada Aqalka Cad ay sheegtay in Flynn uu “Kalsooni buuxda ka haysto madaxweynaha”. Waa maxay aragtida madaxweynuhu?
Flynn ayaa sidoo kale ka soo muuqday safka hore ee shirkii jaraa’id ee madaxweyne Trump iyo ra’iisalwasaaraha Kanada Justin Trudeau ay qabteen Isniintii.
Trump oo labo saxafi siiyay fursad ay su’aalo ku waydiin karaan ayaan su’aaasha Flynn la waydiinin sidaas ayuuna kaga baxsay jahwareerkan taagan.
Afhayeenka Aqalka Cad, Sean Spicer ayaa la waydiiyay in madaxweynuhu uu ogaa in Flynn uu safiirka Ruushka kala hadlay arrimaha xayiraadda, Spicer ayaana yiri “maya, arrintaasina sinaba uma dhici karto”.